ပထမဆုံး လ ၂၀ အတွင်း အစီးရေ ၅၀၀,၀၀၀ ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ကား။ ကမ္ဘာအနှံ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ တွေ့လေ့ရှိတဲ့ကား။ အဲဒီအချိန်တုန်းက Audi A4 ဟာ Bonjovi ၊ Forrest Gump ဒါမှမဟုတ် Gameboys တွေလိုမျိုး ရေပန်းစားခဲ့တာပါ။ ဒီလိုမျိုး ဂုဏ်ဒြပ်တွေနဲ့ ကျော်ကြားလှတဲ့ Audi A4 ရဲ့ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များဆီကို တစ်ခေါက်လောက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်......
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်တုန်းကပေ့ါ။ အတိအကျဆိုရင် ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ အဲဒီတုန်းက ကျနော်ကိုးနှစ်သားပဲရှိသေးတယ်။ ကျနော်မှတ်မိနေတာတွေက ကားနောက်ခန်းမှာထိုင်ပြီး ဘယ်တော့မှ မရောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ရလောက်အောင်ရှည်တဲ့ ပြင်သစ် ဒါမှမဟုတ် အီတလီကို သွားခဲ့တဲ့ခရီးတွေ။ ကျနော့်မှတ်ဉာဏ်မှာ အတိအကျကြီးတော့ မရှိတော့ဘူး။ ဒါပေသိ ဆူညံတဲ့အသံတွေ၊ အရမ်းပူလာလို့ မကြာခဏမှန်တံခါးကို လှည့်ပြီးဖွင့်တာတွေကိုတော့ မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ ရေဒီယိုတွေ၊ ကက်ဆက်တွေဆိုတာက ကျနော်တို့ရဲ့ ခေတ်ပေါ်မီဒီယာတွေဖြစ်ခဲ့တာဗျ။ Walkmans နဲ့ Gameboys တွေကတော့ ကားနောက်ခန်းက ကျနော်တို့လို ကလေးငယ်တွေကို ကောင်းကောင်းကြီးဖမ်းစားထားတာပေါ့။ ကျနော့်အာရုံစူးစိုက်မှုတွေကို အပြည့်အဝယူနိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပါ။ ကျနော်စီးခဲ့တဲ့ Audi ဟာ အဲဒီအချိန်တုန်းက နောက်ခန်းထဲက ကျနော့်ရဲ့အာရုံတွေကို ဒီလောက်ကြီး မလွှမ်းမိုးနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကွင်းဆက်လေးကွင်း သင်္ကေတအတွက်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာတကယ့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ။
ဂျာမနီတို့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းပြီးနောက် Audi : စံချိန်တင် အနုတ်အသိမ်းများမှသည် အလုပ်ချိန် လျှော့ချမှုများအထိ
၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်။ Berlin တံတိုင်းကြီးပြိုကျသွားတယ်။ အရှေ့နဲ့ အနောက်ဂျာမနီ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းမိကြတယ်။ ရလဒ်ကတော့ စီးပွားရေးတက်လာတယ်။ ဒီလို အရောင်းတက်လာတာဟာ Audi အတွက် အများကြီးအကျိုးပြုခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ်အတွင်း စံချိန်တင် ငွေအဝင်အထွက် 14.8 billion DM (Deutsche Mark : ထိုအချိန်က အနောက်ဂျာမနီစတင်အသုံးပြုခဲ့သော ငွေကြေးစနစ်) အထိရှိခဲ့တယ်။ နောက်နှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှတော့ အဲဒီကိန်းဂဏန်းတွေဟာ ထိုးကျသွားပါတော့တယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးပျက်ကပ်ကြောင့်ပါ။ ဂျာမနီတို့ရဲ့ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းနောက် မဟားတရား ထိုးတက်လာတဲ့ စီးပွားရေးဟာ ဒီမှာပဲ နိဋ္ဌိတံလို့သွားပါတော့တယ်။ Audi သမိုင်းပညာရှင် Ralf Friese ကတော့
“အဲဒီအချိန်တုန်းက အရောင်းတွေဟာ အီနေခဲ့တယ်။ ရလဒ်ကတော့ အလုပ်ချိန်တွေတိုတောင်းလာပြီး ၁၉၉၃ နဲ့ ၉၄ မှာတော့ အလုပ်သမားအင်အားပါ ယာယီပဲဖြစ်ဖြစ် လျှော့ချခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Audi A4 ထွက်လာချိန်မှာတော့။” ဆိုပြီး အကျိုးဆက်တွေကို ပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Audi A4 : Audi အတွက် အမြဲစိမ်း အသက်ကယ်ကြိုး
၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာတော့ model အသစ် အမည်ပေးပုံအသစ်နဲ့အတူ Audi ဟာ ခေတ်သစ်တစ်ခုကို ကမ္ပည်းစတင် ရေးထိုးလိုက်ပါတော့တယ်။ Audi V8 နေရာကိုဆက်ခံလိုက်တဲ့ model အသစ်ဟာ A8 ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ မတ်လအတွင်း မိတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနွေမှာပဲ Audi 100 ကို A6 ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ model အသစ် ထပ်မံထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပြန်တယ်။ နိုဝင်ဘာလမှာတော့ mid-size ကားအသစ်ကို ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ Audi A4 ပါ။ တောင်းဆိုမှုတွေက မျှော်လင့်ထားတာထက်တောင်မှ များပြားခဲ့ပါတယ်။ ချက်ချင်းကြီးဆိုသလို ရောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်လာပါတော့တယ်။
၁၉၉၅ ခုနှစ် ဂျာမနီနိုင်ငံအတွင်းမှာတင်ပဲ အစီးရေ ၁၂၀,၀၀၀ အထိ ရောင်းချခဲ့ရတယ်။
“Audi A4 ဟာ အဲဒီအချိန်တုန်းက Audi ရဲ့အသက်ကယ်ကြိုးပါပဲ။ အဝယ်တွေက အမြဲလိုကိုတက်နေတော့တာ” လို့ Friese က ပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါပေသိ Audi A4 ဟာ အပြည့်အဝ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးကားအဖြစ် ဘယ်လိုမျိုး ဝေဆာလာခဲ့သလဲ? နေရာတကာမှာ အတွေ့ရဆုံးသော အများကြိုက်ကား ဘယ်လိုဖြစ်လာခဲ့လဲ?
ခေတ်သစ် ဂန္ထဝင် Audi A4 ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်း
၁။ ခေတ်ဟောင်း လက်ရာများကို နုတ်ဆက်ခြင်း : Audi A4 ဟာ Audi ရဲ့ ပုံရိပ်သစ်ဆီကို ရောက်အောင် မောင်းပို့နိုင်ခဲ့တာပါ
၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ Audi ဟာ သူတို့ရဲ့ ခေတ်မမီတော့တဲ့ ပုံရိပ်ဟောင်းကနေ လွန်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါဟာလည်း Audi A4 ရဲ့ အကူအညီအများဆုံးပါခဲ့တာပါ။ Mid-size sedan အနေနဲ့ သိပ်ကို ရောင်းခဲ့ရပြီး ဂျာမနီရဲ့ မော်တော်ယာဉ်ကဏ္ဍမှာတောင် နှစ်များစွာ ကြာတဲ့အထိ အမှတ်အသားအဖြစ် စွဲထင်စေခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းဟာ ဂျာမနီကနေတစ်ဆင့် ကျန်တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ပျံ့နှံ့သွားပါတော့တယ်။
ကြော့ရှင်းရည်မွန်တဲ့ sporty ဒီဇိုင်းနဲ့ Audi ဟာ BMW3series တို့ Mercedes C class တို့နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက် အသင့်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
“ကျနော့်အတွက်တော့၊ Audi A4 ဟာအကျွမ်းကျင်ဆုံးဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ရာလိုပါပဲ။ နောက်ပြီး Audi အတွက်လည်း သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုပါ။ ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု ဖြစ်လာစေတဲ့ မှတ်တိုင်ကို စိုက်ထူလိုက်တာပါပဲ။” ဟု Friese ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
၂။ Audi A4 ဟာ sporty ဆန်ပြီး လောင်စာဆီစားသုံးမှုနည်းတဲ့ ကားတစ်စီးပါ
Audi A4 ဟာ သူတို့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “Vorsprung durch Technik” (နည်းပညာ ဖြင့်ဦးဆောင်ခြင်း) နဲ့အတူရှင်သန်နေတာပါ။ အရှေ့အောက်ပိုင်းမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ four-link front suspension ဟာ ထူးခြားတဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး steering ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြင့်တက်စေတဲ့အပြင် ရှေ့ယက်ဘီးတွေရဲ့ steering အပေါ်သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုဖြည့်စွက်ချင်တာကတော့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ တပ်ဆင်လိုက်တဲ့ five-valve အင်ဂျင် မျိုးဆက်သစ်ပါ။ အဲဒီအချိန်တွေတုန်းက အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ four-cylinder ဓါတ်ဆီအင်ဂျင် သုံးမျိုးနဲ့ V6 အင်ဂျင်နှစ်မျိုးကို အသုံးပြုလေ့ရှိကြတယ်။ ပြိုင်ဘက်ကင်းဖြစ်စေတဲ့ five-valve cylinder head ကို 1.8L အင်ဂျင်နှစ်မျိုးမှာ အသုံးပြုခဲ့တယ်။ ဒီ “5-valve engines” တွေကို သာမန်အင်ဂျင်အနေနဲ့ရော 1.8T အနေနဲ့ turbocharger အင်ဂျင်အဖြစ်နဲ့ပါ အသုံးပြုခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင် ဒါဟာ အင်အားပြည့်ဝပြီး လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု ချွေတာရေးအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။
Audi ချစ်သူတွေအတွက် Audi A4 (B5) 1.6 ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည် ကိန်းဂဏန်းလေးတွေကို ဖေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန် အဲဒီအခါက ဘယ်သူမှမယှဉ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကိန်းဂဏန်းကလေးတွေပါ။
အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း - 191 km/h
အမြင့်ဆုံး ပါဝါ - 74 kW (101 PS)
အရှိန် - 0-100 km/h ကို 11.9 seconds အတွင်း
Audi A4 : ခံစားမှုနှင့် ဆင်ခြင်တုံတရားတို့၏ ဆုံမှတ်
100 km မောင်းနှင်ဖို့အတွက် 5.1 - 8.8 liters လောင်စာဆီကုန်ကျမှုသာလိုအပ်တဲ့ Audi A4 ပထမမျိုးဆက်ဟာ အဲဒီအချိန်တုန်းက လောင်စာဆီစားသုံးမှု သိပ်ကိုနည်းတယ်လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒါဟာ Audi A4 အတွက် sporty ဆန်တဲ့ကားဖြစ်နေတာတောင်မှ ယုံကြည်အားထားစရာဖြစ်ခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း ဂုဏ်ဒြပ်တွေကို ရရှိစေပါတယ်။ Friese က A4 ရဲ့ အရေးကြီးပုံကို
“အဲဒီ model ဟာ အခု Audi ရဲ့တွေးခေါ်မှုအလေ့အထကို မျိုးစေ့ချပေးခဲ့တာပါ။ ဒီဇိုင်း၊ အရည်အသွေး၊ ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ အနုစိတ်တိကျမှုတွေကိုပေါ့။ ပုံစံဟောင်းကို စုတ်ဖြဲလိုက်ပြီး လူကြိုက်များတဲ့ ပုံစံအသစ်ဆီသို့ အရောက်မောင်းနှင်လိုက်ခြင်းလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။” ဟု ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
၃။ ပျော်ရွှင်မှုနှင့် အသုံးဝင်ခြင်းကို ရောသမမွှေခြင်း : Audi A4 ဟာအမြဲတမ်းကို စိမ်းလန်းနေပြီး စမ်းသပ်မှုတွေမှာ အောင်ပွဲဆင်နိုင်ခဲ့တာပါ
၁၉၉၄ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကတည်းက Audi A4 ဟာ သူ့အရွယ် sedan တစ်စီးရဲ့ တန်ဖိုးကို ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးသား။ “ခေတ်မီ နည်းပညာမြင့်မားမှုနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှု တွေရရှိနိုင်မယ့် အထူးသီးသန့် mid-size sedan ဟာ Audi A4 ပါပဲ။” ဒါဟာ ဈေးနှုန်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အချိုးကို ကောင်းမွန်စေပြီး ဂျာမနီက မိသားစုတွေအတွက်တော့ ပြီးပြည့်စုံမှုကိုပါ ရရှိစေခဲ့တာပါ။
၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်စုအများအပြားဟာ ငွေကို ချွေတာနေကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် A4 ဟာ တိုင်း၍ယက်သည့် ပက္ကလာလိုမျိုး မိုးရွာတာနဲ့ အခန့်သင့်ပါပဲ။ A4 ဟာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဈေးနှုန်းမကြီးမြင့်ပါဘူး။ နောက်ပြီး နှစ်တွေအကြာကြီးလည်း ယုံယုံကြည်ကြည်မောင်းနှင်စီးနင်းလို့ရတယ်။ နောက်ပြီး ထုတ်ကုန်ရဲ့ အတွင်းခန်းမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့အရည်အသွေးနဲ့ အနုစိတ်တိကျမှုတွေဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် သာလွန်တဲ့ဝင်ငွေတွေပြန်လည်ရရှိစေတော့တာပါပဲ။
Audi A4 ဟာ ဝယ်ယူအသုံးပြုသူတွေအတွက် လက်တွေ့အသုံးကျမှုသက်သက်သာမဟုတ်ပါဘူး၊ ပျော်ရွှင်စရာကျေနပ်ဖွယ်ရာ ခံစားမှုကိုလည်း ရရှိစေပါသေးတယ်။ အခုဆိုရင် Audi A4 ကို ဂျာမနီမှာ “hip” လို့တောင်မှ ခေါ်နေကြတာပါ။ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့အရည်အသွေးတွေအားလုံးရှိတဲ့ ‘ဒီ’ ကားဟာ ဂျာမန်လူလတ်တန်းစားအတွက် လုံးဝကို ကွက်တိ၊ မရှိမဖြစ် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ABS နဲ့ လေအိတ်တွေဟာ စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပါ
Audi 80 နဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် Audi ဟာ စံသတ်မှတ်ချက် အင်္ဂါရပ်တွေကို အများကြီးတိုးတက်စေခဲ့ပါတယ်။ Audi A4 အတွက် ဆောင်ပုဒ်က “ပေးရတဲ့ငွေထက် ပိုတန်တဲ့ကား” ဖြစ်ပြီး တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ အဲဒီ ဈေးဗန်းခင်းခြင်းဆောင်ပုဒ်ထက်တောင်မှ ပိုသာနေပါသေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဝယ်ယူသူဟာ တခြားဟာတွေအပြင် အရေးကြီးတဲ့ safety features တွေကိုပါ ရရှိနိုင်လို့ပါပဲ။ အဲဒါတွေကတော့ ABS (ဘရိတ်စနစ်) ၊ လေအိတ် နှစ်လုံး နဲ့ ခေါင်းမှီ လေးလုံးဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ optional အနေနဲ့မှာယူမယ်ဆိုရင်တော့ “driver information စနစ်ကိုမှာ LCD မျက်နှာပြင်အကြီးကြီးနဲ့” ဒါမှမဟုတ် “ဂျာမနီ ကွန်ယက် တယ်လီဖုန်းကိုမှ လက်ကိုင်စရာမလိုဘဲ ရေဒီယိုအသံတိတ်စနစ်နဲ့” ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေကနေ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်!
Ref: ’90s Cult Car: 25 Years of the Audi A4 by Audi